Mpanamboatra tavoahangy fitaratra / tavoahangy vita amin'ny vera, mpamatsy - China Glass Cosmetic tavoahangy / tavoahangy vita amin'ny tavoahangy
Cucurbit azo averina refillable Cucurbit miendrika tavoahangy fanosotra veromanitra vera miaraka amin'ny lohany sy satrony kapoaka
Tombo-kase, fampisehoana famehezana tsara, tsy mila miahiahy momba ny fandatsahana votoaty ianao. Kely sy mety. Mora entina, tonga lafatra amin'ny dia. Mora diovina sy azo ampiasaina indray. Mety amin'ny famenoana serum, menaka, menaka fanosotra, menaka manitra, vokatra fikarakarana hoditra, moisturizer ary vokatra fikarakarana hoditra hafa.
30ml sy 50ml ho an'ny safidinao,
500ml tavoahangy paompy shampoo tsy misy vera tavoahangy azo averina ho an'ny shampoo, fanasana vatana, savony, losion, menaka
Ampiasao ity dispenser savony ity hanavaozana haingana ny habaka amin'ny fandroana anao. Ity dispenser savony ity dia vita amin'ny vera matevina mangarahara miaraka amin'ny vatana mamirapiratra izay mora hita, ary ny paompy vy mora ampiasaina dia manome ranon-javatra mety tsara ho anao isaky ny mitazona ny latabatrao tsy ho diso. Ity mpizara sabatra vera marobe ity dia azo ampidirina mora foana amin'ny haingon-trano efa misy, ary afaka handravaka ny zorony rehetra ao an-tranonao, hatrany an-dakozia ka hatrany amin'ny latabatra fidiovana ary koa ny koveta fanasananao. Ampiasao miaraka amina kojakoja fitaratra mifandrindra mba hamoronana rivo-piainana maoderina sy tsotra amin'ny habakabakao.
Tavoahangy vita amin'ny vera vita amin'ny vera vita amin'ny tavoahangy 100 tsy misy fangarony fitoeran-javatra F r fandroana fandroana fandroana fandroana volo fametahana volo
Shampoo tsy misy BPA, menaka fanosotra, vatana ranona, crème, foam, shampoo ary kaontenera hafa.
Ny tavoahangy dia lehibe ka azo faritana marika shampoo, gel mando, menaka fanosotra amin'ny vatana, sns.
Vokatra azo ampiharina sy lafo vidy ao an-trano. Maharitra ary azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra;
Tavoahangy fitaratra poloney tsy misy fangarony miaraka amin'ny satrony sy borosy
Ny indostrian'ny famokarana Easypack dia mivarotra tavoahangy fitaratra isan-karazany miaraka amin'ny haben'ny 3m ka hatramin'ny 250 ml, manomboka amin'ny tavoahangy fitaratra poleta ho an'ny tavoahangy kely.
15ml tavoahangy poloney vita amin'ny fantsika vita amin'ny vera misy satroka sy borosy
Ny haben'ny vozona 11ml ka hatramin'ny 50ml tavoahangy fitaratra dia 13/415, 15/415 ary 18/415, miaraka amin'ny loko samihafa (toy ny mangarahara, amber ary ny loko manarona) ary ny endriny samihafa (toy ny square, rectangular, Flat square, boribory, bika vita amin'ny cylindrical, spherical, oval ary hafa.
Tavoahangy poleta miloko volom-borona miloko 5ml mena miaraka amin'ny sarom-by sy borosy
Tavoahangy vita amin'ny vera miloko mena miloko 5ml, vozona 13/415, misy sarony sy borosy, tavoahangy poloney kely mahafatifaty. Ny tavoahangy dia misy satroka vy / plastika isan-karazany. Ny sarom-bilany dia mety mainty, fotsy, volafotsy na volamena.
1oz 2oz 4oz kobalt vera fanaovana tavoahangy fanosotra vita amin'ny vera misy rakotra plastika mainty
Ny tavoahangy kosmetika fitaratra 1oz 2oz 4oz kobamika dia mety ho an'ny indostria isan-karazany, ao anatin'izany ny fahasalamana sy ny hatsaran-tarehy, ny fanafody, ny fomba fiaina ary ny fihinana, ny sakafo sy zava-pisotro ary maro hafa.
100g 100ml loko mainty manjelanjelatra vita amin'ny tavoahangy fanosotra vera
Ity siny fitaratra kosmetika vera ity dia mety tsara amin'ny vokatra isan-karazany, ao anatin'izany ny fanadiovan-tarehy, ny serum manohitra fahanterana, ny hoditra, ny menaka, ny moisturizer ary ny vahaolana hafa momba ny fikolokoloana ny hoditra, vita amin'ny akora mainty tena izy fa tsy nofafazana!
Tavoahangy menaka manitra 30ml vera misy tavoahangy miharihary
Ny tavoahangy amber 30ml misy sarony manara-maso dia ampahany amin'ny andian-tavoahangy mitete. Vita amin'ny vera amber madio, mety aminao ny mikasa ny hampiasa ireo tavoahangy ireo. Izy io koa dia tena mety amin'ny fanomezana haingo avo lenta ho an'ny vokatrao. Amber koa dia manome fiarovana UV avo indrindra ho an'ny tavoahangin-drano mitete miloko rehetra, mahatonga azy io ho mitana vokatra sy vahaolana azo hazavaina.
Tavoahangy tena ilaina 15ml misy tavoahangy vita amin'ny alimo mainty
Fomba tsotra sy madio hitaterana madio ny vahaolana amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa nefa tsy misy fako. Rehefa atambatra amin'ny tavoahangy fitetezana mangarahara 15ml misy pipeta fitaratra isika, dia afaka manome safidy fonosana azo antoka sy azo antoka ho an'ny aromatherapy sy menaka manitra anao. Ny tavoahangy mangarahara dia an'ny andian-tavoahangy fitetezana anay, ka azafady azafady fa ny tavoahangy azonao dia kalitao sy maharitra.
Tavoahangy fitaratra miaraka amina famoahana paompy, Tavoahangy paompy fitaratra, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny menaka tena ilaina, Tavoahangy fitaratra fitaratra misy paompy, Tavoahangy fitaratra misy paompy famaohana, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny shampoo,